Yini okudingeka ukwazi ngemifino yokuqala?
Kakade ekupheleni kukaFebhuwari noma ekuqaleni kukaMashi, singakwazi ukuthenga imifino yokuqala, emva kwakho konke, kumnandi ukuzitholela ngamavithamini emva kwebusika eside. Amavithamini emvelo awazange abe yingozi kunoma ubani okwamanje, ngisho noma ayabiza kakhulu. Kodwa hhayi okuhle, ngoba imifino emisha ingaba yingozi kakhulu. "Ama-vithamini abamba ukushisa"
Emifino yokushisa kanye nemifino emhlabathini akuyona nje ukuthanda okuhlukile, kodwa futhi nama-chemical compounds. Ngempela, ukwenza izithelo zemifino zivuthwe, zisebenzisa ama-fertilizer amaningi nezinto ezivuselelayo. Kunengqondo ukuthi uma bevuthwa kakhulu, kuyingozi kakhulu izithelo.
I-nitrate iyinhlanganisela ye-nitrogenous esisiza izitshalo zikhule ngokushesha. Uma kungekho amavithamini e-antioxidant okwanele, i-nitrate ivele ngokushesha, engabangeli nje ubuthi kuphela, kepha futhi i-oksijini indlala yamathambo womzimba, futhi uma isetshenziswa njalo, khona-ke kukhona ingozi yokuthola izicubu ezimbi.
Ngokudlulela kwe-nitrate, isifiso se-agronomist sokutshala imifino akusiyo njalo ngokushesha, lokhu kungenzeka ngenxa yokungahambisani nemikhiqizo yokulima, ukushisa okungalungile, umbuso wamanzi, ukuphakama kwembewu ephezulu.
Kodwa hhayi yonke imifino iqoqa nitrate. Isipinashi, i-dill, u-anyanisi, isithombo, i-ulethisi, iklabishi, isithombo, izaqathe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-zucchini, i-broccoli, ukhukhamba cishe izothola. Okuphephile kulokhu kuyisitamatisi, amahlumela aseBrussels, i-pepper, amazambane kanye nama-legumes.
Amathiphu awusizo ekuthengeni imifino
uma uthenga imbongi yaseBulgaria, qaphela ukuthi "indebe" yakhe kufanele ibe yilabo abaluhlaza;
Isithombo akufanele sibe mkhulu kakhulu, kanzima, ngaphandle kwamabala nokuhlukanisa;
uma uthenga iklabishi encane, ukhethe ngamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka, ahlanzekile, amanzi;
noma yimiphi imifino namakhukhamba kufanele kube umbala ohlaza okomnyama. Ukhukhamba akufanele kube lula futhi unesikhumba esinyene;
emifino emikhulu kune "chemistry";
uma usenquma ukuthenga imifino emisha, kungcono uye esitolo, hhayi emakethe. Ngakho ungaqiniseka ngokutholakala kwezitifiketi zekhwalithi ezikhuluma ngokuphepha kwemikhiqizo kanye nezinga elijwayelekile le-nitrate.
Yiqiniso, akunakwenzeka ukukhipha ngokuphelele ukuthengwa kwemikhiqizo ngaphandle kwe-nitrate. Kodwa kancane kancane lokhu kusengenzeka. Lokhu kungenziwa kanjani?
ngaphambi kokuba uqale ukupheka imifino, ugeze kahle, ususe izingxenye eziluhlaza zezithelo, ikakhulukazi amazambane nezinqathe;
khona-ke udinga ukufaka imifino emizuzu engama-20 emanzini abandayo, ukuwagcoba, nokuwagcoba ekuhlanzeni futhi;
Ukhukhamba kanye nesithombo kungcono ukuqeda isikhumba, unqume umsila;
ekudleni akuyona into engathandeki ukudla iziqu zemifino, kunezinto ezinobungozi ngaphezu kwazo kunamahlamvu;
uma imifino ingekho ngaphansi kokwelashwa okushisa, bese ufafaza ngelamula ka-lemon - i-asidi iyokwenyusa i-nitrate;
lapho ukwelashwa kokushisa, i-nitrate iya cishe cishe ngu-80%, kodwa awukhohlwa ukukhipha ngokushesha amanzi lapho imifino iphekwe khona, bese uwafaka usawoti;
akudingeki ukugcina imifino isikhathi eside emakhazeni, ikakhulukazi ukusika imifino.
Akufanele neze kunikezwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-8 ubudala, njengoba uhlelo lwabo lokugaya lungenamandla kakhulu ukwamukela nokugaya i-nitrate. Uma umuntu omdala engaboni lutho olulimazayo, ingane ingase izwe ubuhlungu obunobuthi.
Okufanayo kuya kubantu asebekhulile, ikakhulu labo abanenhliziyo noma izinkinga zokuphefumula. Imifino yokuqhathaniswa kokuqala yabomama abakhulelwe nabangelali, ngoba kukhona ingozi yezifo zesimiso sezinzwa zesisu.
Uma unomuzwa wokuthi unobuthi, uqale ukuhlanza, uhudo, ubuhlungu besisu, kufanele uhlanza ngokushesha isisu sakho, ubangele ukuhlanza, futhi uthathe amalahle acushiwe (ithebhulethi elilodwa nge-10 kg yesisindo somzimba womuntu). Uma kungakapheli amahora ambalwa lesi simo asizange sithuthuke, kungcono ukubona udokotela.
Yeka ukuthi i-Green Tea ithinta kanjani impilo
Yeka ukuthi ungabuyiselwa kanjani amaholide?
Ukuphulukisa impahla ye-mandarin
I-puff pastry ne-tomato ne-basil
U-Andrey Malakhov waphula izinhliziyo zabalandeli bakhe ngezithombe ezinama-sexy ku-Instagram
Indlela yokukhohlwa uthando oludala, isehlukaniso
I-Yegor Creed yashintsha kanjani isithombe ngaphambi nangemva kokuba umculi ethandwa
Creamy sauce namakhowe
Brown irayisi i-pudding ene-strawberries
Ukudansa kwelabhu - ukushayela namandla anamandla
Izicathulo ezinhle kakhulu zonyaka ka-2010
Ingane ikwesaba ukugebha